Ukwazi ukuba ukhetha njani phakathi kwama-32 okanye ama-64 amasuntswana ukuze usebenze kwiWindows | Iindaba zeGajethi
Ngama-32 okanye ama-64 kancinci, kungcono ukusebenza kwiWindows?
Umbulali weviniga | | Izicelo, software, Windows
Uninzi lwabantu luze ukubuza lo mbuzo ngexesha elithile ebomini babo, kuba bafumene umahluko omkhulu kwi ukusebenza ngokukuko kwekhompyuter yomhlobo wakho kunye neyakho. Ukuthetha malunga nama-32 okanye ama-64 bits ngaphambili bekungamele ukuba kuphazamiseke uyilo lweekhompyuter zakho, into okwangoku sisihloko esilula kakhulu nesilula ukusiqonda.
Kuya kufuneka sichaze ukuba uninzi lweekhompyuter zakho kule mihla sele unoyilo lwe-64-bit, ezingabalulekanga kuphela kwiikhompyuter zeMac kodwa nakwabo sifake iiWindows; Ngokusebenzisa iingcebiso ezimbalwa kunye namaqhinga, siya kuphakamisa ukuba kutheni kufuneka usebenzise i-32-bit okanye ikhompyuter engama-64.
1 Kutheni usebenzisa i-32-bit yoyilo lwekhompyuter?
2 Kutheni usebenzisa i-64-bit yoyilo lwekhompyuter?
3 Umahluko osisiseko phakathi kwama-32 kunye nama-64 amasuntswana
4 Ndiyichonga njani inkqubo engama-32 okanye engama-64?
Kutheni usebenzisa i-32-bit yoyilo lwekhompyuter?
Esona sizathu siphambili nesiphambili sokuba umntu akhokelwe Sebenzisa ikhompyuter enoyilo olunama-32-bit kunye nenkqubo yokusebenza kwizibonelelo eziphantsi zeqela; Oku kuthetha ukuba ukuba ikhompyuter yethu (ilaptop okanye i-desktop) inememori encinci ye-RAM, inciphise indawo yediski enzima kunye nokusetyenziswa okulula ukusebenza nayo, ayizukufuneka ngaphaya kolu hlobo loyilo.
Ukuba sithetha ngekhompyuter yeWindows, ukuze inkqubo yokusebenza isebenze ngokufanelekileyo kolu hlobo lwekhompyuter (enama-32 bits) kuyakufuneka ubuncinci i-1 GB ye-RAM, kucetyiswa ukuba iphindwe kabini. Izicelo ekufuneka sizisebenzisile kule ndawo yokusebenza kuya kufuneka zilula kwaye zichaneke, nangona ukuba siza kukhetha enye nge-tint yobungcali (njengeAdobe Photoshop) kuya kufuneka sijonge uhlobo oluhambelana nolwakhiwo. Ngelishwa ayizizo zonke iinkqubo zobuchwephesha ezihambelana neebhithi ezingama-32, into oya kuthi ube nakho ukuyibona ukuba ufuna umzuzu othile faka ingxelo yokugqibela yeAdobe Premiere, ehambelana kuphela namaqonga ama-64-bit.
Kutheni usebenzisa i-64-bit yoyilo lwekhompyuter?
Ukuba siza kwenza umsebenzi okhethekileyo, oku kuya kubandakanya ukusetyenziswa kwekhompyuter enezixhobo ezikhulu, eziza kuthi zimele ngokuthe gabalala i-RAM, indawo enkulu yediski kwaye kunjalo, izicelo ezinkulu zobungcali.
Oku kunokubandakanya utyalo-mali olongezelelweyo kwabo banekhompyuter engama-64-bit, kuba inkqubo yokusebenza ayizukusebenza ngokufanelekileyo ukuba sine-4 GB ye-RAM kuphela. Ubuncinci i-8 GB ye-RAM iyafuneka kuzo zombini iiWindows 7 njengohlobo lwamva nje lwenkqubo yokusebenza ecetywayo nguMicrosoft; Ngoku, ukuba sisathandabuza malunga nohlobo loyilo lokusetyenziswa kwikhompyuter ngezicelo ezahlukeneyo esinazo ngeli xesha, siya kuphakamisa imizekelo embalwa yezona zinto zibalulekileyo umahluko okhoyo phakathi kwala maqonga mabini.
Umahluko osisiseko phakathi kwama-32 kunye nama-64 amasuntswana
Imemori ye-RAM. Ikhompyuter enobugcisa obungama-32-bit ayinakusebenzisa ngaphezulu kwe-4 GB ye-RAM, ngelixa enye ineebhitithi ezingama-64 isaphula isithintelo se-8 GB ukuyisebenzisa, iyahambelana nokuba ukuya kuthi ga kwi-128 GB ye-RAM.
Inkqubo yokwenzaokanye. Kwikhompyuter ye-64-bit ungafaka inkqubo yokusebenza eneempawu ezifanayo kunye nenye eneebhit ezingama-32; Imeko echaseneyo ayinakunikwa, kuba ikhompyuter ye-32-bit ayinakho ukufaka inkqubo yokusebenza engama-64, kodwa inye kuphela engama-32.
Ukuhambelana kwesicelo. Izicelo ezihambelana nazo zombini ezi zakhiwo zinokuqhutywa kwikhompyuter ye-64-bit kunye nenkqubo yokusebenza. Izicelo zobuchwephesha ezingama-32 azinakuqhutywa nangaliphi na ixesha kwikhompyuter ye-64-bit kunye nenkqubo yokusebenza.
Ukusebenza kakuhle. Kwikhompyuter ye-64-bit, kuyakubakho ukusebenza okungcono nakusiphi na isicelo, esidlula kude kunokunikezelwa yikhompyuter enama-32-bit.
Ngokubhekisele kwinto yokugqibela esele siyikhankanyile, abo baziva bonwabile ekukhetheni ikhompyuter ye-64-bit ngabalandeli bemidlalo yevidiyo, kuba ezo zicelo zokuzonwabisa ziyenziwa kwaye tBasebenza ngokutyibilika ngokubanzi ngokuthelekiswa nekhompyuter enama-32-bit.
Ndiyichonga njani inkqubo engama-32 okanye engama-64?
Xa sithetha ngenkqubo sibhekisa kuyo yonke ikhompyuter kunye nenkqubo yayo efakiweyo yokusebenza; Ukuba sifuna ukwazi uyilo lwekhompyuter yethu, kufuneka sizame ukufumanisa uhlobo lweprosesa esiyifakileyo kwikhompyuter.
Ukwenza oku, kuya kufuneka singene kuphela kwi-BIOS kwaye sikhangele kwiscreen sokuqala ngohlobo loyilo olunalo. Kulapho siyakwaziswa khona ukuba sinamabhanti angama-32 okanye elinye linamakhonkco angama-64 ezandleni zethu.
Ukuba sinekhompyuter eneprosesa ezingama-32, akunakuphepheka siya kunyanzelwa ukuba sifake inkqubo yokusebenza engama-32. Ukuba endaweni yoko sine-64-bit processor, kule khompyuter sinokufaka i-32-bit okanye i-64-bit yokusebenza kwenkqubo, ibe yinto ecekecekwe nguMicrosoft kolu hlobo lwetyala.
Nje ukuba inkqubo yokusebenza yenziwe, siya kuba nakho ukuphonononga uhlobo lwenguqulo ye-OS esiyifakileyo, kuba ngenxa yoku kufuneka ngenisa iipropathi zeWindows. Umfanekiso esiwubeke kwinxalenye ephezulu usibonisa ngokucacileyo uhlobo lwenkqubo yokusebenza (icandelo lesoftware) elinayo ikhompyuter yethu, ekubeni ichongwe kakuhle kwi-64 bits. Ukuba eli nqaku likhoyo, ke kufuneka siqiniseke ukuba iprosesa yethu ikwanama-bits angama-64.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ngama-32 okanye ama-64 kancinci, kungcono ukusebenza kwiWindows?
Iimpawu zedemo ze-PES 2015
Ezinye iindlela zokukhupha usetyenziso lweWindows